भूकम्प कार्यशालामा बोल्दै, ğmamoğlu च्यानल इस्तानबुल मर्डर प्रोजेक्ट हो RayHaber
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलभूकम्प कार्यशालामा बोल्दै, İmamoğlu च्यानल इस्तानबुल मर्डर प्रोजेक्ट हो
इमामोग्लु च्यानलले भूकम्प क्यालिस्टेन इस्तानबुल हत्या प्रोजेक्टमा कुरा गर्यो
इस्तानबुल भूकम्प कार्यशालामा बोल्दै इस्तानबुल महानगरपालिकाका मेयर एकरेम ğमामोलुलाई "च्यानल इस्तानबुल" परियोजनाको जिम्मा दिइयो। नहर इस्तानबुल केवल समुद्री यातायात परियोजना मात्र नभएको बताउँदै इमामोग्लुले भने कि यस परियोजनाले जोखिमहरू पनि समेट्न सक्छ जुन शहर र समुद्र दुवैमा शहरको पर्यावरणीय सन्तुलन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ।
एम लेक्स, बेसिनहरू, कृषि क्षेत्र, आवास, भूजल प्रणाली र शहरको सम्पूर्ण यातायात प्रणाली आलोचनाबाट प्रभावित छन्। कृषि जग्गाको विनाश बाहेक, टापु इस्टानबुलको सामुद्रिक र नयाँ च्यानल खोल्नको लागि गठन गरिने छ, एक्सएनयूएमएक्स लाख जनसंख्याको जेल सजायको स्थिति देखा पर्‍यो। यस फ्रिक प्रोजेक्टको साथ 8 मिलियन देशको भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा कैद गरिनेछ। ” इमामोलुले औंल्याए कि धेरै आकर्षण केन्द्र, शहर, कारखाना, विद्यालय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ पैसाले कनाल इस्तानबुलमा खर्च गर्न सकिन्छ र भने, 'के म अर्को मुद्दा हुँ कि भोक सीमामा लाखौं नागरिकहरू आफ्नै शहर र गाउँहरूमा रोजगार पाउन सक्छन्)। सारांशमा, यो परियोजना इस्तानबुललाई धोकादायी परियोजना पनि होइन। यो आधिकारिक रूपमा एक हत्या परियोजना हो। यो इस्तानबुलको लागि अनावश्यक प्रकोप परियोजना हो। जब यो परियोजना समाप्त हुन्छ, इस्तानबुल समाप्त हुनेछ ..
इस्टानबुलको अगाडि सबैभन्दा ठूलो प्रकोपमध्ये एक भूकम्पको सवालमा छलफल गर्ने "भूकम्प कार्यशाला" इस्तांबुल कांग्रेस सेन्टरमा शुरू भयो। भूकम्प जोखिम प्रबन्धन र शहरी सुधार विभाग, इस्तानबुल महानगरपालिका (आईएमएम) का प्रमुख ताईफुन कहरामनले डिसेम्बर2र3डिसेम्बर बीच आयोजित कार्यशालामा पहिलो भाषण गर्नुभयो। माइक्रोफोन लिइसकेपछि काहरामन, आईएमएमका अध्यक्ष एकरेम इमामोग्लु, इस्तानबुलले संसारको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भूकम्प गल्ती लाइनद्वारा प्रभावित बस्तीका कारण तनावग्रस्त भएका थिए। यस कार्यशालामा, ğmamoğlu भने कि तिनीहरू शहरको स्पष्ट सडक नक्सा बनाउनको लागि आएका थिए। इमामोग्लूले भने कि विगतमा इस्तानबुलमा कुनै पनि कुराले काम गरेनन् वा उनीहरूले जस्तो गरे पनि काम गरेनन् एल्बेटेट बिभिन्न कारणहरू छन् जुन चीजहरू रोकिन्छ वा रोकिन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण 'हामी' होइन तर 'म' व्यवस्थापनको रूप हो, "मलाई थाहा छ" दृष्टिकोण भनेको राष्ट्रको आवाज र इच्छाको समझ हो। तसर्थ, जब हामी प्रशासनमा आएदेखि हामी एक यस्तो व्यवस्थापनको लागि प्रस्थान गर्‍यौं जसले साझा दिमागलाई परिचालन गर्ने छ। हामीले जीवनको हरेक क्षेत्र र इस्तानबुलको हरेक आवश्यकताको बारेमा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्न शुरू गर्यौं। हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरू, विज्ञहरू, साझेदारहरू र हितग्राहीहरू सँगै ल्याउँछौं। ”
ईन् वर्कशपको सब भन्दा बढि महत्त्वेपूर्ण काम हामीसँग आज छ "
इमामोग्लू भने कि शहर एक जिगस क्षेत्र हुनु हुँदैन, त्यसकारण, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, दिमाग र विज्ञान, तिनीहरूले जोड दिए कि तिनीहरूले निर्देशन दिए। इमामोलुले उक्त कार्यक्रमको महत्त्व औंल्याए "हामीले हालसम्म गरेका वर्कशपहरू मध्ये सब भन्दा महत्वपूर्ण", किनकि बिर्किंकि नगरपालिका प्रशासन र मेयरको प्राथमिक कर्तव्य भनेको त्यस शहरमा बस्ने प्रत्येक नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसोभए तपाईले पहिले, त्यसपछि सामानहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्य सबै क्षेत्रमा आवश्यकताहरू, परियोजनाहरू र सेवाहरू मात्र पछि आउन सक्छन्। अर्कोतर्फ, त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन् कि तपाईं यी क्षेत्रहरूमा के गर्नुहुन्छ, कति प्रयास गर्नुहुन्छ वा तपाईंले के प्राप्त गर्नुहुन्छ प्रायः अस्पष्ट हुन्छ। धेरै अज्ञात धेरै नगण्य वास्तवमा, श्रम, समय र संसाधनहरू बांड गर्न सम्भव छैन जुन तपाईंले ती क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नुहुनेछ। भूकम्प र प्रकोप पूर्वतयारी क्षेत्र ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो।तै पनि, र जब तपाईं भूकम्प वा प्रकोपको सामना गर्नुहुन्छ, तपाईंको अघिल्लो तयारीहरू कति रणनीतिक र कसरी जीवन-बचावटलाई बुझिन्छ। हुनसक्छ यस कारण राजनीतिज्ञहरू, विशेष गरी जनवादी राजनीतिज्ञहरूले यी क्षेत्रहरूमा बढी ध्यान दिएनन्। जसरी उनीहरूले ग्लोबल वार्मिंग र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको मुद्दालाई वेवास्ता गर्छन्। हामी त्यस्तो राजनीतिज्ञ होइनौं, ”उनले भने। बेइलीक्दाजी मेयर अमामोउलुको अवधिमा भूकम्पमा उनीहरूले गरेको कामलाई सferring्केत गर्दै भने:
पीआर ईर्थक्वाक यस शहरको सब भन्दा महत्वपूर्ण जोखिम हो "
“हामी आफ्नो टाउको बालुवामा राख्न सक्दैनौं। हामी बाइट्स। यस शहरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जोखिम भूकम्प हो। र यो जोखिम त्यति सानो जोखिम होइन। यसबाहेक, यो जोखिम इस्तानबुलको जोखिम मात्र होईन। सबै टर्की गरेको जोखिम। हामी एक महान अराजकता र एक राष्ट्रिय प्रकोपको सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन जीवन रोकिनेछ र अर्थव्यवस्थालाई ठूलो क्षति हुनेछ। हामी वर्तमान 1.2 मिलियन संरचनाहरूको सामना गर्ने एक ठूलो जोखिमको बारेमा कुरा गर्दैछौं। हामी जोखिमको बारेमा कुरा गर्दैछौं कि 48 हजार भवनहरू गम्भीर रूपमा बिग्रिनेछन् र हजारौं नागरिक मर्नेछन्। तसर्थ, नयाँ व्यवस्थापनको रूपमा, हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य इस्तानबुललाई प्रकोपहरू र विशेष गरी भूकम्पप्रति प्रतिरोधी शहर बनाउनु हो। हाम्रो सबैभन्दा ठोस लक्ष्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा सबै वैज्ञानिक समाधान प्रस्तावहरूलाई ध्यान दिएर रोडमैप उत्पादन गर्नु हो। हामी वैज्ञानिक डेटामा आधारित दृष्टिकोण खोज्न चाहन्छौं र सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको विचारलाई ध्यानमा राख्दै कारबाही लिन चाहन्छौं। ”
इमामोग्लुले भूकम्पमा इस्तानबुलले धेरै समय गुमाएको कुरा फेला पारे र भने, nasıl यस्तो ठूलो जोखिममा पर्ने समाज कसरी बेवास्ता गर्न सकिन्छ? मलाई कुनै आपत्ति छैन। " उनीहरु अरु धेरै समय बर्बाद गर्न चाहँदैनन् भनेर बताउँदै इममाउलुले भने, हेप्सी सबै विश्वविद्यालय, संस्थान, गैर-सरकारी संगठन, केन्द्रीय र स्थानीय सार्वजनिक संस्थानहरु; योग्यता, प्रशिक्षण र विशेषज्ञता। सबैजना सबै निवारक र पुन: स्थापना प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्छ। किनकि यो एक परिचालन हो। ”
SA यदि तपाईंसँग सीमित बजेट छ, तपाईं कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? "
भूकम्पजस्तो ज्वलन्त मुद्दा भएको बेलामा ğमामोलुले "च्यानल इस्तानबुल" परियोजनाको आलोचना गरे र भने, "मँ सबै इस्तानबुललाई सोध्न चाहन्छु: यदि तपाईको सीमित बजेट छ भने तपाईले त्यो बजेट कसरी खर्च गर्नुहुन्छ?" यदि तपाईंलाई परिवारका सदस्यहरूलाई खुवाउनको लागि खाना प्राप्त गर्नमा कठिनाई छ भने। यदि तपाईंसँग राम्रो र स्वस्थ तरीकाले आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवाउन र सिकाउन पर्याप्त आय छैन भने। तपाईं आफ्नो घर मा अनावश्यक र आलीशान फर्नीचर किन्न debtण मा जाने वा तपाईं बैंक देखि orrowण र छुट्टी मा जान चाहानुहुन्छ? एक परिवारको रूपमा, एक बुबा, एक आमा, तपाईं के ख्याल गर्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नै बजेट खर्च गर्ने योजना गर्नुहुन्छ? यदि तपाईं एक ट्रेडमेन, एक व्यापारी, एक व्यापारी हो, तपाईं कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? स्मार्ट ट्रेडमेन, ट्रेडर वा स्मार्ट व्यापारीको रूपमा, के तपाईं आफ्नो जित्नेबाट याटहरू किन्नुहुन्छ? वा के तपाईं लगानीहरू गर्न चाहानुहुन्छ जसले तपाईंको कम्पनीको अस्तित्व सुनिश्चित गर्दछ ”। यी प्रश्नहरूको उत्तर निश्चित छ भनेर बताउँदै İmamoğlu ले भने:
एम हाम्रो प्राथमिकता ईस्टानबुल हुन सक्छ? "
सीरम बजेटको साथ सोरलुलु जिम्मेवार अभिभावकहरू हरेक पैसा खर्च गर्नु अघि दश पटक जिम्मेवार व्यवसायिकहरू सोच्दछन्। छालाले तथाकथित मानव प्रकारको जस्तो काम गर्दैन जसले पिउन थाल्छ। तर एक बुद्धिमान सार्वजनिक प्रशासक, एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ, कसरी सार्वजनिक बजेट खर्च गर्ने योजना गर्नुपर्छ? के यो देश, रोजगार, उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्राथमिकता होईन? के तपाई देशका स्रोतहरु कच्चा सपनामा खर्च गर्नुहुन्छ? यस शहरमा केहि समयको लागि एउटा च्यानल इस्तानबुल परियोजनाको बारेमा कुराकानी भएको छ। के तिनीहरूले हामीलाई कहिले सोधे? के उनीहरूले हाम्रो राय लिए? लाखौं युवा, युवा मानिसहरू,4लाख प्रतिभाशाली व्यक्ति बेरोजगार र हताश छन्। जब यी सबै मानिसहरू गरिब छन्। सबै उत्पादनको साथ। जब त्यहाँ धेरै कारखानाहरू निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ। 16 मिलियनको यो शहरका बच्चाहरू, यस ठूलो शहरको भविष्य, पर्याप्त भोजन दिन सक्दैन। जबकि धेरै भारित अंश पूर्वस्कूल शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन। भीडभाड गरिएको कक्षा कोठामा अध्ययन गर्दा के हाम्रो प्राथमिकता केनल इस्तानबुल हुन सक्छ? "
नहर इस्तानबुल केवल समुद्री यातायात परियोजना मात्र नभएको बताउँदै इमामोग्लुले भने कि यस परियोजनाले जोखिमहरू पनि समेट्न सक्छ जुन शहर र समुद्र दुवैमा शहरको पर्यावरणीय सन्तुलन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। इमामोलुले आफ्नो जोखिममा यी जोखिमहरूलाई सूचीकृत गरे:
परियोजना परियोजना तालिका, खोला, कृषि क्षेत्र, आवास, भूजल प्रणाली र शहरको सम्पूर्ण यातायात प्रणाली द्वारा आलोचनात्मक रूपले प्रभावित छ। कृषि जग्गाको विनाश बाहेक, टापु इस्टानबुलको सामुद्रिक र नयाँ च्यानल खोल्नको लागि गठन गरिनेछ, 8 मिलियन जनसंख्याको जेलवासको स्थिति देखा पर्दछ। यस फ्राक प्रोजेक्टको साथ, 8 मिलियन देशको सबैभन्दा उच्च भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा कैद गरिनेछ। विश्वमा यस्तो कुनै राज्य छैन जसले भूकम्पको समयमा यति उच्च जनसंख्यालाई अर्को भूगोलमा स्थानान्तरण गर्नेछ। यो ईश्वरको खातिर कस्तो किसिमको परियोजना हो? कारण के हो? हेर्नुहोस्, यस परियोजनामा ​​च्यानल लगभग 45 किलोमीटर लामो, 20,75 मिटर गहिरो र साँघुरो भाग 275 मीटर चौडा छ। Sazlıdere र Terkoz बेसिनहरू हुँदै गएको एक च्यानल। अर्को शब्दहरुमा, यस परियोजनाले Sazlıbosna र Terkoz बेसिन क्षेत्रहरु लाई नष्ट गर्दछ। यसले टेरकोज तालको भूगर्भीय पानी र नुनिलोको जोखिम उठाउँदछ। यो स्पष्ट छ कि इस्तानबुलले पिउने पानीको आवश्यकताको लागि ठूलो खतरा रहेको छ। यो एक्लोपनाले यो प्रोजेक्ट नगर्न पर्याप्त कारण हो! के इस्तानबुलका मानिसहरूले समुद्रको पानी पिउन सक्छन्? अर्कोतर्फ, यस परियोजनाले 1,1 मिलियन नयाँ जनसंख्या ल्याउने छ। अर्को शब्दमा, नयाँ जनसंख्या6Beşiktaş वा5बाकिरकी जिल्लाको आकार बराबर थपिनेछ। यस परियोजनाको कारणले, 3.4 लाख नयाँ यात्राहरू सिर्जना गर्दछ। इस्तानबुल यातायात कम्तिमा 10 प्रतिशत बढ्नेछ। 23 मिलियन वर्ग मीटर वन क्षेत्र, 136 मिलियन वर्ग मिटर कृषि क्षेत्र नष्ट हुनेछ। त्यहाँ Sazlıdere बाँध हुनेछ। राज्य हाइड्रोलिक वर्क्स (डीएसआई) ले यस परियोजनालाई नकारात्मक रिपोर्ट दियो। प्रतिवेदनका अनुसार पानीको आवश्यकता पूरा गर्ने पानी बेसिनको 29 नष्ट हुनेछ। यस च्यानलको निर्माणको साथ विशाल उत्खनन हुनेछ। टीएमएमओबी रिपोर्टका अनुसार, एक्सएनयूएमएक्ससँग एक अरब क्यूबिक मिटर उत्खनन हुनेछ। दैनिक 2.1 हजार खुदाई ट्रक इस्तानबुल ट्राफिकमा भाग लिनेछ। यो अस्पष्ट छैन कि उत्खनन कहाँ खस्नेछ! उत्खनन, उदाहरणका लागि; यदि Güngören-Esenler-Bağcılar यी जिल्लाहरुमा फैल्यो, यी जिल्लाहरु को बारे मा 10 मिटर बढ्नेछ। "
"त्यहाँ इस्टानबुल बसपोरस यातायात मा एक सम्झौता हो!"
1।, 2।, र 3। भूकम्प जोनहरूमा डिग्री इ Imam्गित गर्दछ कि इमामोग्लु, "उत्तरी एनाटोलियन फाल्टबाट 11 किलोमीटर, सिनारिक फाल्टबाट 30 किलोमिटर पार हुन्छ। वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि च्यानल इस्तानबुल प्रोजेक्टले पृथ्वी र भूमिगत तनाव सन्तुलनलाई विघटन गर्दछ, र अधिक भारहरूले नयाँ भूकम्प निम्त्याउँछ। बोस्फोरसको ऐतिहासिक कपडाको संरक्षण परियोजनाको कारणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जे होस्, परियोजनाको साथ, 17 ले लाख वर्ग मिटरको SIT क्षेत्रलाई असर गर्छ। Küçükçekmece ताल र Yarımburgaz गुफा को किनारमा Bathenoa प्राचीन शहर जो पहिलो बस्तीहरु मध्ये एक हो परियोजना क्षेत्रमा। म तपाईंको ध्यान बासफोरस ट्राफिकमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। ईआईए आवेदन फाइलमा दावी गरिएको अनुसार बोस्फोरस ट्राफिक बर्षको तुलनामा वृद्धि होइन, तर यसको विपरित, विशेष गरी पछिल्लो 10 वर्षमा, 22,46 प्रतिशतको कमी देखिएको छ। Yılda नकारात्मकताहरू इस्तानबुलमा मात्र सीमित हुनेछैन भन्ने भन्दै उमामोलुले जोड दिए कि मारमार समुद्री क्षेत्र र क्षेत्र पनि गम्भीर खतरामा छन्:
"अत्यधिक उर्वरा कृषि र वन क्षेत्र 45 किलोमीटर लामो र औसत 150 मिटर चौडाइ सदाको लागि हटाइनेछ। किनकि इस्तानबुल प्रायद्वीप थ्रेस छोड्नेछ, नयाँ जडान पुलहरू आवाश्यक हुनेछ। कालो सागरबाट मारमारा सागरमा एकतर्फी स्रावका कारण मारमार समुद्री भारी प्रदूषित हुनेछ। यो स्थितिले मारमारा सागरको माछा मार्ने र माछा पालन गर्ने व्यवसाय र यस व्यवसायमा बस्ने मानिसहरूको जीवनलाई जोखिममा पार्दछ। यस च्यानलले मौसम परिवर्तन पनि गर्नेछ। विनाश भएको देशको साथसाथै त्यहाँको वन्यजन्तु पनि नष्ट हुनेछ। ”
"जब यो परियोजना पूरा हुन्छ, तब इस्तानबुल पूर्ण हुनेछ"
इमामोलुले औंल्याए कि धेरै आकर्षण केन्द्र, शहर, कारखाना, विद्यालय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ पैसाले कनाल इस्तानबुलमा खर्च गर्न सकिन्छ र भने, 'के म अर्को मुद्दा हुँ कि भोक सीमामा लाखौं नागरिकहरू आफ्नै शहर र गाउँहरूमा रोजगार पाउन सक्छन्)। सारांशमा, यो परियोजना इस्तानबुललाई धोकादायी परियोजना पनि होइन। यो आधिकारिक रूपमा एक हत्या परियोजना हो। यो इस्तानबुलको लागि अनावश्यक प्रकोप परियोजना हो। जब यो परियोजना समाप्त हुन्छ, इस्तानबुल समाप्त हुन्छ। यो अद्भुत शहर एक बस्ने शहर हो। सफा हवा, पानीको पूर्वाधार समस्याहरु संग एक्लै छोडिनेछ जुन यातायात को मामला मा समाधान हुन सक्दैन। न त बसफोरस क्रसिंग नै न समुद्री समुद्री यातायात क्रसिंग, न यो आर्थिक दृष्टिबाट आवश्यक छ। यो केवल भाँडाको नयाँ क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नका लागि तयार गरिएको थियो, र यसको विनाशकारी परिणामहरू कहिले पनि विचार गरिएन। यदि कसैले पैसा कमाउँछ भने हामी यस पुरानो शहरको प्राकृतिक वातावरण, आवास र पानीका ढोकाहरू नष्ट गर्न दिँदैनौं वा अनुमति दिँदैनौं। हामी तपाईंको विशेषज्ञता, संवेदनशीलता र साहसका साथ गल्तीहरू रोक्दछौं।
तपाईको साझा सोचको साथ, हामी हाम्रो शहर लाई अधिक सुरक्षित र अधिक आकर्षक र 16 लाख को लागी आकर्षक बनाउनेछौं। धन्यवाद, त्यहाँ छ "।
विशेषज्ञ सहभागीहरु, 2-3 दिसंबर बीच बस्न आयोजित हुनेछ, इस्तानबुलको भूकम्प को विषय लगानी गर्नेछ।
च्यानल इस्तानबुलको लागि विपत्ती चेतावनी! अपेक्षित भूकम्प ...
KOS: 3। एयरपोर्ट यातायात होईन, यसमा इस्तानबुल छैन ...
मृत योजना मिसिन-सावधान हेरविचार मार्फत टूटेको छ
इमामोग्लु: 'म एर्दोगनसँग च्यानल इस्तानबुलमा छलफल गर्न चाहन्छु'
मेयर İmamoğlu: 'हैदरपाँसा र सिरकेसी ट्रेन स्टेशन'
इस्तानबुल एयरपोर्ट हवालानीमा राष्ट्रपति İmamoğlu
आईएमएम कर्मचारीहरू 'स्थायी स्मार्ट शहरहरू'
TÜVASAŞ रणनीतिक को लागी जिम्मेवार छ
च्यानल इस्तांबुल निविदा
समुद्री मारा '